Shaqadeenna - Helitaanka Kaalmo Sinnaan
Waxaan ogsoonahay in u badalashada xagjirnimada rabshadaha aysan dhici kareynin adkeynta adkeysiga bulshada iyo kaqeyb galka dhamaan xubnaha bulshada.
Waan ognahay in caqabadaha waxbarashada gabdhaha si buuxda looga qaadi maayo illaa aan ka hadalno qaanuunka jinsiga.
Waxaan ognahay in carqaladeynta dhalinyarada aan la xakameyn karin hadii aan shaqo la abuurin iyo marin loo helo doorarka hogaaminta.
Waxaan ognahay in dimoqaraadiyada adag ay kudhisan tahay tiirarka sinaanta bulshada iyo cadaalada, una baahan muwaadiniinta kudhaqan iyo dowladaha la xisaabtama.
Waxaan ognahay in sheekooyinka iyo sheekooyinku ay u muuqdaan adduunyo sinnaan isla markaana wax ka qabta arrimaha bulshada oo isbeddelaya.
Anaga oo ka hadlayna caqabadaha ka jira aagagga tababar ee soo socda, ayaanu bulshooyinka isu beddelaynaa.
Iyada oo leh faylal-maalmeed caalami ah oo dhisid nabadeed iyo barnaamijyada P / CVE in kabadan 10 waddan, EAI waa hormuud cusub hal-abuurnimo ka-qaybgalka bulshada, isbedelka dabeecadda, horumarka dhalinyarada ee wanaagsan, iyo barnaamijyada kaqeybgalka warbaahinta ee loogu talagalay in lagu dhiso adkeysiga bulshada, bedelida dhaqdhaqaaqa iskahorimaadka, iyo xoojinta codadka, himilooyinka, iyo hantida dadka ay colaaddu saameysay.
Dhisidda Nabadda & Dib-u-Beddelista Xag-jirnimada
EAI waxay kobcisaa ka-qaybgalka bulshada sidii hab lagu dhiirrigeliyo ka-qaybgalka dadweynaha si loo hagaajiyo maamulka maxalliga ah. Si loo gaaro himilooyinkaas, EAI waxay ku hagtaa shakhsiyaadka iyo kooxaha muwaadiniinta iyada oo loo marayo tababbro taxane ah oo isbeddel ah oo ay kuxirto fursadaha ka qaybgalka bulshada.
Sinnaanta ragga iyo dumarku waa xawaare muhiim u ah in la gaaro horumar waara. Waxaan ku toosinaa habkeena lab / dhedig iyo dhaqamada-fasalka ugu fiican oo horseedi kara saameynta badan.
Horyaalnimada Sinnaanta Jinsiga & Awoodsiinta Haweenka
U fududeynta warbaahinta inay kaqeyb gasho iyo kaqeybgalku waa wadnaha waxkasta oo aan kaqirno EAI. Tan iyo markii ay baahinteenii ugu horreeyay ee ka baxa raadiyaha dayax gacmeedyada u direen kooxaha bulshada ee Nepal iyo Afghanistan horaantii 2000-meeyadii, waxaan u adeegsannay warbaahinta iyo teknolojiyad qaab ay ku lug leeyihiin kuna lug yeelanayaan dadweynaha oo dhan.
Kaqeybqaadashada Warbaahinta & Teknolojiyada
Nagala shaqee annaga oo taageerna nabad, degenaansho, bulsho loo dhan yahay adigoo beddelaya xeerarka iyo xoojinta codadka.